AirPods agaghị ejikọ na Apple Watch? Lee ihe The Real Idozi! - Apple Watch
ụlọ ahịa ngwa agaghị emepe na mac
Ndozi ihuenyo maka iphone 6
iphone ọhụrụ na & ọrụ adịghị
kedu ihe bụ magnifier na iphone
AirPod gị agaghị ejikọ gị na Apple Watch ma ị maghị ihe kpatara ya. Emere AirPods iji jikọọ na ngwaọrụ Apple na ngwa ngwa ozugbo ị wepụrụ ha n'okwu ikpe, n'ihi ya, ọ nwere ike iwe oke iwe mgbe ihe mejọrọ. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe kpatara na AirPods gị anaghị ejikọ Apple Watch gị wee gosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ !
Etu esi Etu AirPods Gị na Apple Watch gị
Ọ ga-amasị m ịmalite site na ịkọwa otu esi ejikọ AirPods gị na Apple Watch gị. N'ebe ahụ, ihe abụọ ị ga - eme tupu ị jikọọ AirPods gị na Apple Watch:
Jide n'aka na ejiri AirPods gị na iPhone gị
Dị njikere na iPhone ejikọtara na Apple Watch gị
Nọmalị, gị AirPods ga seamlessly ejikọ niile nke Apple ngwaọrụ jikọrọ gị iCloud akaụntụ. Ọ bụrụ na ị nwetara AirPods gị ma ejighị n'aka etu esi esi jikọọ ha na iPhone gị, lee isiokwu m anya na na-ejikọ AirPods gị na iPhone .
Ozugbo ejikọtara AirPod gị na iPhone gị, ị nwere ike ịga Ntọala -> Bluetooth na Apple Watch gị wee hụ na edepụtara AirPods gị.
ekwesịrị ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ
Ozugbo AirPods gị gosipụtara na Ntọala -> Bluetooth, mepee ihe nkwụ ụgwọ ma kpatụ AirPods gị na Ntọala -> Bluetooth na Apple Watch gị. You ga-amata na ejikọtara AirPod gị na Apple Watch gị mgbe ị hụrụ Ejikọtara n'okpuru aha Apple Watch gị.
N'oge a, ịnwere ike iwepụ AirPods gị n'okwu ikpe ahụ, tinye ha na ntị gị, ma nwee ọ songsụ egwu kachasị amasị gị ma ọ bụ akwụkwọ ọdịyo! Ọ bụrụ na ị setịpụrịrị AirPods gị iji jikọta gị iPhone na Apple Watch, mana ha anaghị ejikọta ugbu a, soro usoro nchọpụta nsogbu usoro n'okpuru iji dozie nsogbu ahụ!
Malitegharịa ekwentị gị Apple Watch
AirPods gị nwere ike ọ gaghị ejikọ Apple Watch gị n'ihi nsogbu sọftụwia dị ntakịrị ma ọ bụ ngọngọ teknụzụ. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ịmalitegharị Apple Apple gị nwere ike idozi nsogbu ahụ.
Nke mbu, gbanyụọ Apple Watch gị site na ịpị na ijide bọtịnụ Akụkụ ruo mgbe mmịfe Ike Gbanyụọ na ngosipụta ahụ. Swipe ihe mmịfe ahụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie Apple Watch gị.
gịnị kpatara na ekwentị m anaghị emelite na ios 10.2
Chere ihe dị ka sekọnd 15, wee pịa ma jide bọtịnụ Akụkụ ọzọ ruo mgbe ị hụrụ akara Apple gosipụtara na ihuenyo ahụ. Apple Watch gị ga-agbanye azụ mgbe sekọnd ole na ole.
Gbanyụọ Ọnọdụ ụgbọelu na Apple Watch gị
Site na ndabara, Bluetooth na-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe Ọnọdụ ụgbọelu na-arụ ọrụ na Apple Watch gị. Iji lelee ma ọnọdụ Airgbọelu agbanwuru, swipe elu na ala ihu nche ma lee akara ngosi ụgbọelu.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu akara ngosi bụ oroma, mgbe ahụ Apple Apple gị dị na Ọnọdụ ụgbọelu. Enweta na akara ngosi na-atụgharị plagbọelu Mode anya. Ga-amata na ọ kwụsịrị mgbe akara ngosi na-acha ntụ.
Gbanyụọ Ike Reserve
Bluetooth nwekwara nkwarụ na Apple Watch gị ka agbanyere Power Reserve. Ọ bụrụ na ịgbanye Nchekwa Ike iji chekwaa ndụ batrị - ọ dị mma!
Chaja gị Apple Watch, gbanyụọ Power Reserve site na ịpị na ijide Akụkụ bọtịnụ ruo mgbe ngosi ahụ gbanyụrụ na akara ngosi Apple na ihuenyo ahụ. Apple Watch gị agaghị adị na ọnọdụ nchekwa ike mgbe ọ na-agbanye azụ.
Melite Apple Watch gị
Ọ bụrụ na AirPods gị agaghị ejikọ na Apple Watch gị, ọ nwere ike na-agba ọsọ ochie nke watchOS. AirPods dabara naanị na Apple Watch na-agba ọsọ watchOS 3 ma ọ bụ karịa.
esi tufuo nkwenye achọrọ na iphone
Imelite Apple Watch gị, mepee ngwa Watch na iPhone gị wee pịa General -> Mmelite ngwanrọ . Ọ bụrụ na melite ngwanrọ dị, pịa Ibudata na Wụnye .
Mara: Naanị ị nwere ike imelite watchOS ma ọ bụrụ na ejiri Apple Watch gị na Wi-Fi ma nwee ihe karịrị 50% ndụ batrị.
Chọpụta AirPods dị na nso Apple Watch
Iji jikọọ AirPods gị na Apple Watch, ngwaọrụ abụọ ga-adị na nso nke ibe ya. Ma AirPods gị na Apple Watch gị nwere oke Bluetooth dị mma, mana ana m akwado ijide ha n'akụkụ n'akụkụ ibe gị mgbe ị nwara ijikọ ha.
Buru AirPods gị na Okwu gingkwụ .gwọ
Otu n’ime ihe kpatara AirPods agaghị ejikọ Apple Watch bụ na AirPods anọghị na ndụ batrị. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ilekwasị anya na batrị AirPods gị n'ihi na ha enweghị ihe ngosi batrị dị na ya.
Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike ịlele ndụ batrị nke AirPods gị na Apple Watch gị. Swipe elu na ala nke nche nche na-emeghe Control Center, na mgbe ahụ enweta na batrị pasent na elu-akaek n'akụkụ. Ọ bụrụ na ejikọtara AirPod gị na Apple Watch gị, ndụ batrị ha ga-apụta na menu a.
I nwekwara ike lelee ndụ batrị nke AirPods gị site na iji wijetị batrị na iPhone gị. Iji tinye batrị na iPhone gị, swipe n'aka ekpe gaa n'aka nri na Ihuenyo mbu nke iPhone gị, wee gbadaa ala wee pịa Dezie . Na-esote, pịa bọtịnụ gbakwunye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'aka ekpe nke Batrị .
Ugbu a mgbe AirPods gị jikọtara na iPhone gị, ị ga-enwe ike ịhụ ole ndụ batrị ha hapụrụ.
Ọ bụrụ na AirPod gị apụọ na ndụ batrị, tinye ha n'okwu ụgwọ ha obere oge. Ọ bụrụ na AirPods gị anaghị akwụ ụgwọ ọbụlagodi na itinye ha na ihe nkwụnye ụgwọ, mgbe ahụ ikpe nkwụnye ọkụ nwere ike ịbụ nke ndụ batrị. Ọ bụrụ na ikuku AirPod gị na-akwụ ụgwọ batrị, were ya site na ijikọ ya na isi ike site na iji eriri Lightning.
iphone 6 gbakwunyere anaghị akụ
Nkwado: can nwere ike ịkwụ ụgwọ AirPods ha na ikpe ha mgbe ebubo na-akwụ ụgwọ. Amaara m na nke ahụ bụ ọnụ, mana ọ ga - enyere gị aka ịmezi usoro ịgba ụgwọ!
Chefuo AirPod gị dị ka Ngwaọrụ Bluetooth
Mgbe ijikọ Apple Watch na ngwaọrụ Bluetooth maka oge izizi, Apple Watch gị na-echekwa data na Kedu iji jikọọ na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ihe agbanweela n'ụzọ AirPods gị ma ọ bụ Apple Watch jikọtara na ngwaọrụ Bluetooth ndị ọzọ, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara AirPods gị anaghị ejikọ Apple Watch gị.
Iji dozie nsogbu a, anyị ga-echefu AirPods gị dị ka ngwaọrụ Bluetooth na Apple Watch gị. Mgbe ị jikọghachirịrị AirPods gị ọzọ mgbe ị chefuru ha na Apple Watch gị, ọ ga - adị ka ị na - ejikọ ngwaọrụ maka oge izizi.
Ichefuru AirPods gị na Apple Watch, mepee ya Ntọala ngwa na pịa Bluetooth . Na-esote, pịa bọtịnụ acha anụnụ anụnụ n'aka nri nke AirPods gị. N'ikpeazụ, pịa Chefuo Ngwaọrụ ichefu AirPods gi.
Mgbe ịchefuru AirPods gị na Apple Watch gị, a ga-echefu ha na ngwaọrụ niile ejikọtara na akaụntụ iCloud gị. ’Ll ga-enyerịrị ha na iPhone gị dịka ị mere mgbe ị setịpụrụ ha maka oge mbụ. Ọ bụrụ n’ichetaghị otu esi ejikọ AirPods gị na iPhone gị, pịgharịa gaa n’elu isiokwu a ma soro ntuziaka anyị.
Kpochapu ọdịnaya na mwube niile
Ọ bụrụ na AirPods gị agaghị ejikọ Apple Watch gị, enwere ike ịnwe nsogbu ngwanrọ zoro ezo na-akpata nsogbu ahụ. Site na ihichapu ọdịnaya niile na ntọala gị na Apple Watch, anyị nwere ike iwepụ nsogbu ahụ nwere ike ihichapụ ya na Apple Watch.
Naanị m na-akwado ihichapu ọdịnaya niile na ntọala gị na Apple Watch mgbe ị mechara usoro niile dị n'elu. Rụ ntọala a na Apple Watch gị ga-ehichapụ ọdịnaya ya niile (ngwa gị, egwu, foto, wdg) wee weghachite ntọala ya niile na nrụpụta ụlọ ọrụ.
Emechaa ọdịnaya na ntọala niile, ị ga-ejikọ Apple Watch gị na iPhone dịka ị mere mgbe ị wepụrụ ya na igbe maka oge izizi.
Ihichapu ọdịnaya na ntọala niile, mepee ngwa Ntọala na Apple Watch wee pịa General -> Tọgharia -> Ghichaa ọdịnaya na ntọala niile . A ga-agwa gị ka itinye akara passc gị, wee pịa Ghichaa Ha niile mgbe mkpuchi nkwenye gosipụtara na ngosipụta. Mgbe ịpịrị Ghichaa Ha niile , gị Apple Watch ga-eme nrụpụta ma malitegharịa obere oge.
kedu otu esi agbanyụ autocorrect na iphone
Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ site na usoro nchọpụta nsogbu niile dị n'elu, mana AirPods gị agaghị ejikọta Apple Watch gị, enwere ike ịnwe nsogbu ngwaike. Anyị enweghị ike ijide n’aka ma enwere ngwaike ngwaike na Apple Watch gị ma ọ bụ AirPods gị, yabụ dee oge ọhụhụ na Applelọ Ahịa Apple dị n’ógbè gị ma weta gị abụọ.
Ọ bụrụ na enwere ngwaike ngwaike na-akpata nsogbu ahụ, achọrọ m ịkụ nzọ na ọ nwere ihe jikọrọ ya na antenna nke na-ejikọ Apple Watch na ngwaọrụ Bluetooth, ọkachasị ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ijikọ Apple Watch na ngwaọrụ Bluetooth ndị ọzọ karịa AirPods.
AirPods gị & Apple Watch: Jikọtara Na Ikpeazụ!
’Ve edozila nsogbu ahụ ma jikọtara AirPods gị na Apple Watch gị nke ọma. Anyị na-atụ anya na ị ga-ekerịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ka ị nwee ike inyere ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị aka mgbe AirPods ha anaghị ejikọta na Apple Watch ha. Daalụ maka ịgụ ihe, ma nweere onwe gị ịhapụ ajụjụ ọ bụla gbasara AirPods ma ọ bụ Apple Watch na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a!